Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » A na-ahụ njem azụmahịa dị ka ihe na-akpata post-COVID US
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ọrụ na -arụpụta ihe na -enwekwa obere nrụgide mgbe ha na -eme njem maka azụmahịa. Naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ (25%) kwuru na ha na -enwe nrụgide karịa mgbe ha na -arụ ọrụ n'oge njem azụmahịa, ebe 32% kwuru na ha enweghị mmetụta dị iche na 43% fọdụrụ na -enwe nkụda mmụọ mgbe ha na -arụ ọrụ mgbe ha na -eme njem.
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ US na -ekwu na echiche azụmaahịa kacha mma na -eme mgbe ha na -eme njem azụmahịa.
Naanị 26% nke ndị ọrụ US na-eche na nzukọ ihu na nke nwụrụ anwụ.
74% nke ndị ọrụ US chere njem azụmahịa na nzukọ onwe onye dị mkpa maka ọdịnihu azụmahịa.
Ihe karịrị ọkara (53%) nke ndị ọrụ US chere na ụlọ ọrụ ha chọrọ nzukọ onwe onye iji lanarị, nchọpụta ọhụrụ achọpụtala.
Nnyocha nke ndị ọrụ US 1,000 nyochara omume gbasara nzukọ ọrụ na njem azụmahịa. O kpughere na naanị 26% nke ndị ọrụ na-eche na nzukọ ihu na ihu anwụọla, ebe ndị fọdụrụ n'ime 74% ikwere nzukọ onwe onye bụ isi maka ọdịnihu azụmahịa.
Ihe karịrị ọkara (53%) na-ekwu na ọ dị mfe ịtụkwasị obi n'ịre ahịa mmadụ na ntanetị, yana 64% na-ekwu na isi ihe ịtụkwasị obi bụ kọntaktị mmadụ. Na mgbakwunye ntụkwasị obi na-abawanye mgbe ị na-ezukọ na mmadụ, nyocha ahụ mere ka ọ pụta ìhè na ịga njem nzukọ onwe onye na-arụpụta ihe-60% nke US ndị ọrụ kwuru na ha na-eme nkwadebe karịa maka nzukọ onwe onye karịa ka ha na-eme maka nzukọ mebere.
Nnyocha ahụ lere echiche n'ozuzu ya njem azụmahịa, na -achọpụta na ọtụtụ ndị ọrụ na -achọsi ike ịlaghachi njem maka ọrụ. 41% kwuru na ha na -ahụ njem azụmahịa dị ka ihe na -atọ ụtọ kemgbe ọrịa ọjọọ, ebe 40% kwuru na njem azụmahịa ga -adị ha mkpa mgbe ha na -achọ ọrụ ọhụrụ. O mere ka ọ pụta ìhè ka ọgbọ ndị na-eto eto si achọsi ike maka njem azụmahịa, ebe ihe karịrị ọkara (54%) nke ndị dị afọ 16-24 na-ekwu na njem azụmahịa bụ ihe na-atọ ụtọ kemgbe ọrịa ọjọọ, ma e jiri ya tụnyere naanị 13% nke ihe karịrị 55s. Na-achọkwa ahụmịhe n'ime ahụ, ọgbọ ndị na-eto eto na-ahụ njem dị egwu karịa. Ihe karịrị ọkara (53%) nke Gen Z na -ekwu na echiche azụmaahịa kacha mma na -eme mgbe ị na -eme njem, ma e jiri ya tụnyere ihe na -erughị otu ụzọ n'ụzọ ise (18%) karịa afọ 55.
Ọmụmụ ihe ahụ lebakwara anya n'ịgbasawanye omume, na -akọwapụta ihe na -adị ndị mmadụ mma ịgbasa mgbe ha na -eme njem maka ọrụ. Ọ chọpụtara na ndị mmadụ nwere ahụ iru ala na -ekesa nri, ebe 83% kwuru na ha ga -alaghachi azụ maka iri nri n'ụlọ nri. Nke a na -ada mgbe ị na -elele ọrụ ime ụlọ, naanị 57% nwere ahụ iru ala ịgbasa ihe ha nyere n'iwu n'ime ụlọ ha. Naanị ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị ọrụ (26%) ga -enwe ahụ iru ala ịgbasa mmanya na -aba n'anya n'onwe ya, ebe ụmụ nwoke nwere ahụ iru ala karịa ụmụ nwanyị (16%vs 8%) na Gen Z na puku afọ ga -enwe ahụ iru ala karịa 55s (36%vs 9%).
Nri ka bụ ndepụta mbụ mgbe ị na -eleba anya n'ihe ndị ọrụ na -ebute ụzọ mgbe ha na -eme njem. 72% chọrọ ịpụ maka nri abalị n'oge njem azụmahịa, ebe 69% chọrọ ịnọ na họtel mara mma yana ihe karịrị ọkara (55%) chọrọ ileta ebe nlegharị anya mpaghara. Ileta mgbatị ahụ adịchaghị ewu ewu (24%), ebe ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ (39%) chọrọ ịpụ n'abalị mgbe ị na -eme njem maka azụmahịa. Na -enyocha ụlọ ọrụ, achọpụtara na HR bụ anụmanụ kacha nwee oriri, ebe 56% na -ekwu na ime abalị bụ ihe kacha mkpa mgbe ị na -eleta ebe ọhụrụ maka azụmahịa.
Mgbe ihe karịrị otu afọ nke ime obodo na -arụkọ ọrụ ọnụ, enweela ọtụtụ mkparịta ụka gbasara ma ụlọ ma ọ bụ ọfịs kacha baara ndị ọrụ uru. Ọtụtụ US ndị ọrụ kwuru njem azụmahịa bụ ihe na -atọ ụtọ ugbu a karịa mgbe ọ bụla. N'ezie, 34% kwuru na ha nwere echiche azụmaahịa ha kacha mma mgbe ha na -eme njem maka ọrụ, na -egosi etu ị ga -esi nwee ọmịiko ịbanye n'ụwa na izute kọntaktị ọrụ na mmadụ nwere ike ịbụ.
Ọ bụ ezie na ịdị mma nke inwe ike ịwụli na oku Zoom maka nzukọ ndị na-adịchaghị mkpa nwere ike ma bụrụ nke a ga-amata, na-abụkarị echiche kacha mma, mmekọrịta kacha mma-yana nsonaazụ kacha mma-na-eme mgbe ndị mmadụ na-eme njem wee zute ihu na ihu.